Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Baqqalaa Garbaa (1961 - ) barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee fi hoogganaa itti-aanaa WFDO (Warraaqsa Federaalistii Dimokiraataawaa Oromoo) ture.
Baqqalaa Garbaa (1961 - ) barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee fi hoogganaa itti-aanaa WFDO (Warraaqsa Federaalistii Dimokiraataawaa Oromoo) ture.
Baqqalaan sababa siyaasatiin Hagayya 27, 2011 Olbaanaa Leellisaa wajjin qabamee mana hidhaa gale. Mana hidhaa keessa erga waggaa afur turee booda gaafa Bitootessa 31, 2015 gadi lakkifame. Olbaana Leellisaa garuu Baqqalaa wajjin hin gadhiifamne.
Baqqalaa Garbaa Oromiyaa keessa godina Wallagga Lixaa aana Boojjii, magaala Boojjii Dirmajiitti bara 1961 dhalate. Barnoota sadarkaa tokkoffaaa achuma Boojjii Dirmajiittii baratee xumure, itti aansun barnoota sadarkaa lammaffaa Mana Barumsa Sadarkaa Lammaffaa Gimbiitti barate. Barnoota olaanaas Yuunivarsiitii Finfinnee galuudhan dame barnootaa afaanii fi ogbarruu biyyaa alaatin digiriisaa jalqabaa fudhate. Digiriisaa kanaan barsiisaa Afaan Ingiliffaa ta'ee mana barnoota sadarkaa lammaffaa magaala Dambii Dolloo fi Mana Barumsa Sadarkaa Lammaffaa Najjoo keessati barsiisaa ture.
Barnoota digirii lammaffaa itti fufuudhan, Baqqalaan bara 2001tti Yuunivarisiitii Finfinneerraa damee barnootaa Ingiliffa akka Afaan Biyaa Alaatti Barsiisuu jedhuun fudhate. Kana booda Koollejjii Barsiisota Adaamaatti qacaramee Afaan Ingiliffaa fi Afaan Oromoo barsiisaa ture. Bara 2005, sababa fincila barattootaa deeggarta jedhuun hojiirraa ari'ame. Baqqalaan kana booda gara Finfinneetti dhufuufhaan waggaa lamaaf kollejoota dhuunfa keessatti barsiisaa erga turee booda bara 2007tti Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ta'ee mindeeffame. Achittis Afaan Ingiliffaa barsiisun tajaajilaa ture.
Baqalaa Garbaa abba maati yoo ta'u ijjoolle afur qaba. Baqqalaan Yuuniversiitii Finfinneerraa barnoota siyaasaan PHD fudhateera.
Baqqalaan sochii siyaasaa ifatti kan jalqabe bara 2009 miseensa WFDO ta'udhan ture. WFDO keessattis miseensa koree hojii-raawwachiiftuu fi hoogganaa hariiroo uummattaa ture. Filannoo Itoophiyaa kan bara 2010 irrattis hirmaatee ture, garuu hin moone. Erga WFDO fi Kongiresin Ummata Oromoo bara 2012 walitti makamanii booda, Baqqalaan oduma mana hidhaa jiruu itti aanaa hoogganaa ta'udhaan filatame.
Qabamuu fi Mana Hidhaa Galuu
Baqqalaa Garbaa ji'a Hagayaa keessa gaafa guyya 27 bara 2011 sababa Amnistii Internaashinaal (Amnesty International) wajjiin wal qunnamtii godheef qabamuun mana hidhaa gale. Seera falmisiisaa kan ta'e seera shororkeessummaatin himanni irratti baname. Himata kanarratti Baqqalaan miseensa ABO ta'uu fi sochii Oromoo Itoophiyaarraa fottoqsuu goote jechuun himatame. Jalqbarratti murtiin wagga saddeetii kan itti murteeffame yoo ta'u boodarra garuu murtiin kun gara waggaa sadi'ii fi ji'a torbaatti gadi xiqqeeffame; mirgi yoo amala gaarii agarsiise dafee akka gadi lakkifamus kennameefi.
Murtii kana booda dhiifama yoo mana murtii gaafatte, waggaan hidhamtu gadi sii xiqqeeffama jedhee yeroo abbaan alangaa Baqqalaatti himu, innis akkas jedhee dhiifama isaanii tuffate
Mirga dimokiraasi fi namoomaa ummata Oromoof, kanan ani fedhii fi hawwii koon odoo hin taane fedhaa Waaqayyoo ta'ee keessatti dhaladhee jecha, qabsoon ani karaa nagaa godhee fi aarsan xiqqoon ani kaffale yakkatti lakkaawwamee seeraan alaa himatamuunkoo na boonsa.
Yoo dhiifama gaafachuun narra jiraate, mana murtii yakka ani hin hojjanneen hidhaa natti murteesse odoo hin taane ummata Oromoo fi waaqayyon gaafadha; ummata Oromoo sababan hacuuccan isaanirra ga'aa jiru ammam hamaa akka ta'e itti himuu dhiisef, kanas kanan godhe saba kaan wajjin waliin jiraachuu akka danda'niif jedhee ta'usaa; Waaqayyoorraa ammoo yoo qabsoon ani mirga Oromoof jecha godhe fedhii dhuunfaa koof jecha ykn beekkamtummaa akka naa dabaluuf jecha kanan godhe yoo ta'e, ummanni biyya kanaa hundi bilisummaadhan, kabajaa fi walqixxummaadhan akka jiraatanif jecha yoon hin goone ta'e Waaqan dhiifama gaafadha."
Baqqalaan mana hidhaa Ziwaay (Baatuu) keessa ture. Bara 2014tti amala gaarii agarsiisun gadi lakkifamuun kan irra ture yoo ta'eyyuu mootummaan Wayyaanee mirga kana dhorkachuudhan hidhaa guutuu xumuruuf dirqame. Mana hidhaa kana keessa waggaa afur erga turee murtiisaa fixatee booda Bitootessa 31, 2015 gadi lakkifame. Baqqalaan mana hidhaatii gaafa ba'u, yeroo namoonni isa galateeffachuuf yaalan akkas jedhe deebiseef:
Ani kanan qabsaa'e ofii kootifi, kanaaf galata na hin barbachiisu. Kanaaqofaan. Osoohindhabbanne baqqalan qabso. Isaa. Akkumahittifufenfilannobaradarbeekana. Irrattihirmaachunmormi. Isaagegesaaturuun. Isaaniyadatama kanarrankanka'e. Obbo baqqalan barakana ergaamanahidhat
tidarbameeture.....Kuta2ffa itti fufa.
Posted by Hasan Ismail at 7:38 AM